विदेशी प्रेमीलाई पाखा लगाउँदै अंगदसँग नेहाको प्रेम !!! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
विदेशी प्रेमीलाई पाखा लगाउँदै अंगदसँग नेहाको प्रेम !!!
बलिउड अभिनेत्री नेहा धूपिया यतिबेला मिडियामा छाउकी छन् । उनले एकातर्फ फिल्म ‘तुम्हारी सुलु’का लागि एक अवार्ड हात पारिन् भने अर्कातर्फ नयाँ प्रेमीसँग रोमान्स गरिरहेकी छन् । यसैकारण उनको बलिउडमा चर्चा बढेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार आजकाल उनी अंगद बेदीसँग डेट गरिरहेकी छन् । केहीवर्ष पहिलासम्म नेहा धूपिया भेनेजुएला निवासी जिम्मी उर्फ जेम्स सेल्भेस्टरसँको प्रेमसम्बन्धमा थिइन् । नेहालाई भेट्न उनी बेलाबेलामा भारत समेत आउने गर्थे । तर, जिम्मीसँग नेहाको ब्रेकअप भयो ।
नेहा धूपियाको जीवनमा पुन: खुशीयाली आएको छ । यसपटक उनको क्रिकेटर बिशन सिंह बेदीका छोरा अंगद बेदीसँग प्रेम भएको छ । आजकाल नेहा र अंगद एकअर्कासँग लामै समय बिताइरहेका छन् । हालै यी दुई जाहिर खानको एक पार्टीमा एकसाथ देखिएका थिए ।
नेहाले भने अंगदसँगको प्रेमसम्बन्धबारे केही पनि खुलाएकी छैनन् । – एजेन्सी
कुटुमा कुटुको नयाँ रेकर्ड…